(SAWIRRO) Maalinta farshaxanka Puntland oo lagu qabtay Garowe. | puntlandi.com
(SAWIRRO) Maalinta farshaxanka Puntland oo lagu qabtay Garowe.
Garowe (Puntandi) Xaflad lagu maamuusayay maalinta farshaxanka Puntland oo sannad walba loo qorsheeyay shantsha bia December ayaa lagu qabtay magaalada Garowe ee caasimadda Puntland, iyadoo ay tahay markii saddexaad oo la xuso.
Waxaa xafladaan kasoo qeyb galay madaxweyne ku xigeenka dowladda Puntland, Eng Camey, xubno katirsan golaha xukuumada, aqoonyahano iyo bahda warbaahinta gaar ahaan sawir qaadayaaasha oo xuskaan iyaga loo sameeyay.
Waxaa goobta xaflada lagusoo bandhigay sawirro isugu jira kuwa Kaamero lagu qaaday iyo kuwa gacanta lagu sawirray oo ka tarjumayay bilicda iyo kheyraadka Puntland, sidoo kale waxaa ku jiray kuwa gacanta lagu sawirray oo si gaar ah u taabanayay dhaqanka
Madaxweyne ku xigeenka Puntland ayaa shahadooyin guddoonsiiyay sawir qaadayaashii madasha kusoo bandhigay xirfadooda, isagoo ku dhiiri galiyay howsha ay hayaan.
Waxaa madaxweyne Camey u sheegay inay ahmiyad weyn dowladdu ugu jirto inweriyayaashu mar walba soo bandhigaan kheyraadka iyo quruxda waddankeeda taala, si caalamka loo tuso Puntland inay tahay dhul ilaaheey ku manaystay nabbad iyo barwaaqo.
Farshaxaniiste Abshir oo sawiraya wajiga madaxweyne Camey.
Sawirka Camey oo goobta uu ku sawirray Abshir Taatiko